Ny dikan-teny miorina voalohany an'ny Trident OS miorina amin'ny Void Linux vonona | Avy amin'ny Linux
Tanisao ny kinova Trident OS miorina amin'ny Void Linux
Tamin'ny Oktobra tamin'ny taon-dasa zarainay eto amin'ny bilaogy ny vaovao momba ny fanapaha-kevitr'ireo mpandraharaha Trident OS hifindra monina avy any BSD mankany Linux Satria amin'ny fomba fijeriny dia misy ny tsy fitoviana eo amin'ny sehatry ny fitaovana, ny fanohanana, ankoatry ny tsy fahafahany manala ireo olana sasantsasany izay mametra ny mpampiasa ny fizarana, ny fanohanana ny fenitry ny serasera maoderina ary ny fisian'ny fonosana.
Amin'ny fiandohan'ny taona, mizara izahay ny vaovao momba ny famoahana ny kinova beta an'ny Trident OS miaraka amin'ny Linux Kernel, izay nifindran'ireo mpandraharaha Trident avy tao amin'ny BSD ka hatramin'ny Linux mifototra amin'ny fizarana Void Linux.
Iray volana aty aoriana tamin'ny fanombohana ny kinova beta Ny mpamorona Trident dia namoaka ny vaovao momba ny famoahana ny kinova Triden 20.02 izay anehoana ny asa farany famindrana ny FreeBSD sy TrueOS ho eo am-pototry ny fonosana Void Linux.
Tanisao ny kinova beta voalohany an'ny Trident OS mampiasa ny Linux Kernel
Samy mampiasa ZFS na beta na ity kinova miorina ity amin'ny fisarahana faka miaraka amin'ny fahaizana mamerina ny tontolon'ny boot amin'ny alàlan'ny fakantsary ZFS.
Ho an'ny mpampiasa tsirairay dia noforonina ny zizakà ZFS misaraka ho an'ny lahatahiry ao an-trano (azonao atao ny manodinkodina ny sarin'ilay lahatahiry an-trano nefa tsy mahazo tombony manokana), omena ao amin'ny lisitry ny lisitry ny mpampiasa ny angon-drakitra.
Ankoatr'izay afaka miasa amin'ny rafitra miaraka amin'ny EFI sy BIOS izy. Ny encryption partition swap dia tohanana ary ny fonosana fonosana voaangona dia omena ho an'ny tranomboky rafitra glibc sy musl (azonao atao ny mampiasa glibc na musl hisafidianana).
Ny installer dia manome ambaratonga efatra amin'ny fametrahana, izay tsy mitovy amin'ny andiana fonosana naroso:
Void: andiana fonosana Void fonosana miampy fonosana ho an'ny fifanarahana ZFS.
Server: fonosana hiasa amin'ny maody console sy serivisy fanampiny ho an'ny mpizara (firewall, cron, autofs, wireguard, sns.).
Desktop Lite: birao kely kely miorina amin'ny birao Lumina.
Desktop feno: birao iray miorina amin'ny Lumina feno misy birao, fifandraisana ary fampiharana multimedia.
Miaraka amin'ny fifindrana mankany Void Linux, mikasa ny hanitatra ny fanohanana ny karatra sary i Trident ary manome ny mpampiasa mpamily sary maoderina bebe kokoa, ary koa fanatsarana ny fanohanana ny karatra feo, ny fandefasana feo, ampio ny fanohanana ny audio amin'ny alàlan'ny HDMI, manatsara ny fanohanan'ireo mpampifanaraka tamba-jotra tsy misy tariby sy fitaovana Bluetooth, manolora programa kinova vaovao, manafaingana ny fizotran'ny boot, ary mampihatra ny fanohanana ny fametrahana hybrid amin'ny rafitra UEFI.
Ny safidin'ny Void Linux ho fototry ny rafitra dia satria ny distro dia manaraka ny maodelin'ny tsingerina mitohy hanavao ireo kinova rindrambaiko (fanavaozana mifandimby, tsy misy kinova fizarana misaraka).
Ny tetik'asa dia mampiasa ny mpitantana ny rafitra runit hanombohana sy hitantanana serivisy, hampiasa ny mpitantana fonosana xbps azy manokana ary ny rafitra fivoriambe fonosana xbps-src. Raha tokony ho Glibc, Musl dia ampiasaina ho tranomboky mahazatra sy LibreSSL fa tsy OpenSSL.
1 Ampidino ny Trident 20.02
1.1 Amboary ny beta mankany amin'ny kinova miorina
Ampidino ny Trident 20.02
Ho an'ireo liana amin'ny fizahan-toetra ny asa nataon'ny Trident developer tamin'ny fifindra-monina ny rafitr'izy ireo mankany Linux, Azonao atao ny misintona ny sary miorina amin'ny tranokala ofisialiny.
Mba handraisana ny sary dia azonao atao amin'ny Etcher izay fitaovana multiplatform.
Amboary ny beta mankany amin'ny kinova miorina
ankehitriny ho an'ireo izay naka ny kinova beta ary nitoetra tao izy ireo. afaka manavao ilay kinova tsy miovaova izy ireo nefa tsy mila mametraka indray ilay rafitra.
Ho an'ity tsy maintsy mamela ny trano fitahirizam-bokin'ny Trident izy ireo miaraka amin'ireto baiko manaraka ireto:
Avy eo dia tsy maintsy ampifanarahan'izy ireo amin'ny alàlan'ny:
Ampifanaraho amin'ny repository ny:
Hanontaniana izy ireo raha te hanaiky / hitahiry ny lakilem-bahoaka ho an'ny tranombarotra Project Trident. Kitiho fotsiny ny "y" ary tsindrio enter raha tehirizo ny lakile.
Vita izao hanatanteraka ny fanavaozana isika amin'ny alàlan'ny fanoratana ny iray amin'ireto baiko manaraka ireto:
Izay hametraka ny rafitra fototra ihany ary eto ny safidy atolotra ho an'ireo mpampiasa za-draharaha na ireo izay maniry ny hanangana ny rafitra mifanaraka amin'ny safidiny.
Raha ho an'ireo izay te tsy hanasaro-javatra dia afaka mametraka ny rafitra feno amin'ity baiko manaraka ity izy ireo:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Tanisao ny kinova Trident OS miorina amin'ny Void Linux
int dia hoy izy:
Inona no anjara birikiny raha oharina amin'ireo kinova ofisialin'ny VOID? Satria na inona na inona Lumina ...
Mamaly an'i Ent
Tanisao ilay kinova PeerTube 2.1 vaovao miaraka amina interface interface sy safidy tsara kokoa